बिहानै बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनबारे आयो यस्तो समाचार! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > बिहानै बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनबारे आयो यस्तो समाचार!
admin July 15, 2020 अन्तराष्ट्रिय, जीवनशैली	0
यो दुर्घटना २४ जुलाइ १९८२ मा बैंगलोरमा भएको थियो । फिल्म ‘कुली’को एक द्वन्द्वको दृश्यको सुटिङ भइरहेका बेला पुनित इस्सरको मुक्का अमिताभको अनुहारमा लागेपछि उनी टेबलमाथि लडेका थिए । कुली २ डिसेम्बर १९८३ मा रिलिज भएको थियो । यो दृश्यको लागि बडी डबलको सहारा लिने कुरा भएको थियो तर दृश्य वास्तविक लागोस् भनेर अमिताभले आफैं गर्ने निर्णय गरेका थिए । सिन पूरै वास्तविक देखियो, उपस्थितले ताली बजाए, अमिताभ मुस्कुराए ।
तर, त्यही बेला उनको पेटमा पीडा सुरु भयो । टेबलको एक कुना अमिताभको पेटमा नराम्रोसँग लागेको थियो । सबैलाई यो सामान्य चोट लागेको थियो किनकि रगतको थोपा पनि बगेको थिएन । अमिताभ होटलमा आराम गर्न गए तर पीडा कम भएन । भोलिपल्ट पीडा झनै बढेपछि उनलाई अस्पताल लगियो । एक्स–रे गरियो तर डाक्टरले केही पत्ता लगाउन नसकेपछि उनलाई निद्राको औषधि दिएर सुताइयो । खबर पाएपछि आमा तेजी, पत्नी जया र भाइ अजिताभ बैंगलोर पुगे । उनीहरु अमिताभलाई मुम्बइ ल्याउन चाहन्थे तर डाक्टरले अनुमति दिएनन् । तेस्रो दिन २६ जुलाइमा अमिताभको हालत झनै बिग्रियो ।
१९ बर्षिया बाग्लुङकि अँशु बेल्जियमबाट त फर्किइन तर यस्तो दुःखद! तेश्रो परिक्षणमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि…